'जेल फर नो क्राइम'
‘जेल फर नो क्राइम’
के तपाईंले कुनै लेख पढ्नुभएको छ वा चलचित्र हेर्नुभएको छ जहाँ कूनै व्यक्तिलाई अपराधबिना नै जेलमा राखिएको हुन्छ ? लेख पढ्नुभएको थिएन वा चलचित्र हेर्नुभएको थिएन भने पनि खैर केही छैन म तपाईलाइ सामान्य तरिकाले पात्र नै चिनाइदिनेछु। त्यो पात्र तपाईं हो, त्यो पात्र म हूँ। बिना अपराधको तेस्रो हप्ताको जेल जीवन बिताइरहेको हामीलाई सम्भवतः चौथो र पाँचौ हप्तामा पनि स्वागत गरिनेछ।
पात्र म ! म जेलमा ! जेल, कस्तो जेल, को बस्यो जेल ? तपाईंले यी प्रश्न गर्नुअघि नै भनिहालौं, ‘लकडाउन’बारेको लेखको ठीक एक चौथाई भागमा तपाईं हुनुहुन्छ। लकडाउनसँगै केही हप्तादेखि आफ्नै घरभित्र वा आफ्नै कोठामा थुनिएर बस्नुपर्दा निस्सासिए झैं भएर आफ्नै घर जेल झैं लागिरहेको होला ।
कति सुत्ने, कति खाने, कति मोबाइल मात्र चलाउने ! विरक्त लागेको होला ।
आफ्नै घर कसरी जेल हुनसक्छ ? घर त घर हो, घरमा आँगन छ, छत छ, बाल्कोनी छ । यसकारण घर पूर्ण रूपमा जेल होइन । त्यसो भए जेल के हो त ? जेल आफ्ना इच्छाहरुको विरूद्ध अरूले खडा गरिदिएको पर्खाल न हो । स्वतन्त्रताको पखेटा काटिदिएपछि उड्न खोज्दा पछारिएको अवस्था हो । बाँच्ने स्वतन्त्रता त जेलमा पनि त हुन्छ तर आफ्नो इच्छा अनुरुप बाँच्ने स्वतन्त्रता चाहिँ हुँदैन । खान त जेलमा पनि पाइन्छ तर आफ्नो स्वाद अनुरुप पाइँदैन,लाउने व्यवस्था पनि हुन्छ तर आफूलाइ मन परेको कपडा चाहिँ होइन। बात मार्ने स्वतन्त्रता पनि हुन्छ तर उचो आवाज र जेलर र अधिकारीलाई मन नपर्ने विषयमा होइन । तपाईं बुझ्नुहोला जेल भनेको बन्द कोठा हो । फलामे डन्डीहरूले बारिएको पर्खाल हो । तर जेल भनेको त स्वतन्त्रतादेखि अलग्याइएको अवस्था हो, इच्छाहरुमा तालाबन्दी गरिएको अवस्था हो, न्यायाधिशहरूको अगाडि गलत सावित भएको अवस्था हो।
के तपाईंलाइ थाहा छ कानून कसरी बन्छ ? कसले बनाउँछ ? कानून सक्नेले बङ्ग्याउन मिल्ने गरी छिद्रसहित जेल बनाउनेहरूले बनाउँछन् । त्यसो भए जेल कसले बनाउँछन् ? जेल पूँजीपतिहरूले बनाउँछन्, व्यापारीहरूले बनाउँछन्, धनी पुरूषहरूले बनाउँछन्, गोरा छाला भएकाहरूले बनाउँछन्, समाजमा प्रभूत्व जमाइराख्न खोज्नेहरूले बनाउँछन् । हो यिनीहरूले बनाएका छन् पितृसत्ताको जेल, धर्मको जेल, प्रथाको जेल, भाषा-संस्कृतिको जेल, रङ्गको जेल, लैङ्गिकताको जेल, जाति-प्रजातिको जेल, आविस्कारको जेल, राजनीतिको जेल । ह्या यस्तो पनि जेल हुन्छ भनेर नकड्किनुस् न ! मैले भर्खरै माथि भनिसकें त जेल भनेको पर्खालभित्रको कालो बन्द कोठा मात्र होइन, जेल भनेको आफ्ना इच्छाहरुको विरूद्ध अरूले खडा गरिदिएको पर्खाल हो । मानवीय स्वतन्त्रताको पखेटा काटिदिएपछि उड्न खोज्दा पछारिएको अवस्था पनि हो । इच्छा र स्वतन्त्रता खोसिने विभेदको कारण हो । विभेद सबैभन्दा ठूलो जेल हो । लकडाउनको तेस्रो हप्तामा आफ्नै घर र कोठामा मर्नेगरी निसासिन्छ मान्छे । तपाईं सोच्नुस् त वर्षौंदेखि विभेदको अदृश्य जेलभित्र कसरी बाँचिरहेछ महिला, दलित, रैथाने, जनजाति, अल्पसंख्यक, कालाजाति, गरीब र असहाय मानिसहरू ।
आफूले बनाएको सामग्री मूल देउताकहाँ राखेर पूज्नेहरूले आफूहरूलाई अझै पनि घरभित्र पस्न नदिँदा दलितहरूलाई घरको मूलढोका जेलको पर्खालभन्दा भयानक लाग्छ । छाला कालो भएकै कारण हेपिइरहनू पर्दा कालाजातिलाइ रङ्ग जेल भन्दा भयानक लाग्छ । छोरी भएकै कारण गर्भबाटै फालिनुपर्दा छोरीलाई गर्भ कारागार लाग्छ । रैथाने भएकै कारण असक्षमको बिल्ला भिराइदिँदा रैथानेलाई आफ्नो अनुहार मजाक लाग्छ । भोक टार्न नसकेर नून चाटेर रात कटाउनु पर्दा गरीबलाइ गरीबी नर्कभन्दा डरलाग्दो लाग्छ । मधेसी भएकै कारण नेपालप्रतिको वफादारितामा शंका गरिन्छ, स्वतन्त्रता माग्दा अभियन्ताहरूको छातीमा गोली जाकिन्छ। सत्ताको सिँढीमा बसेर भत्ताको आनन्द लिनेहरूले आजभोलि आवाजहरू दवाइरहेछन् । आवाजहरू भयानक हुन्छन् । आवाज अदृश्य जेलको ठूला पर्खाल भत्काउने क्षमता राख्दछन् ।
अर्कोतर्फ पूँजीपतिहरू सस्तैमा मदिराको आदत लाएर महङ्गोमा औषधी बेचिरहेछन् । सुन्दरताको विश्वव्यापी भ्रम फैलाएर हरेकलाई खर्बौंको कस्मेटिक बेचिरहेछन् । महंगो सामान प्रयोग गर्नेलाई इज्जतको हकदारको प्रचारबाजी गरेर उल्लू बनाइरहेछन् । उपभोक्तावादी संस्कृतिको निर्माण गरेर पूँजीपतिहरू छुट्टै नयाँ विभेद र असमानताको विरूवा हुर्काउँदैछन्। यी विभेदहरु मुठ्ठीभर मान्छेहरूको स्वार्थबाट निर्देशित छन् । विभेदको उद्देश्य मुठ्ठीभर मान्छेहरूको एकाधिकारको निरन्तरता हो । विभेेदको भाइरस कोरोनाभन्दा डरलाग्दो छ । लकडाउनको जेलभन्दा विभेदको अदृश्य जेल कैयौं गुणा भयानक छ । तपाईं र म अहिले लकडाउन नामक जेलमा बिनाअपराध पनि यसकारण बसिरहेछौं कि यो हाम्रै भलाइको लागि हो । तर अरुको भलाइ र स्वार्थको लागि बिनाअपराध जेल कोही किन परोस् ? के कालो हुनु, गरीब हुनु,छोरी हुनु या कुनै पनि भाषा, सम्प्रदाय, जाति, भौगोलिकता आदिको सदस्य हुनू अपराध हो ? यदि होइन भने पाइला-पाइलामा विभेदको अदृश्य जेल किन ?